Search ချောင်းရိုတ် - BajarFB.com
Search Results - ချောင်းရိုတ်
လောကကြီးထဲကနေ ရုတ်တရက်နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်ခွါသွားခဲ့တဲ့ သမီးလေး susan ..... သူ ချစ်ရ ခင်ရတဲ့ သူတွေအားလုံးအတွက် တမလွန်ဘ၀ကနေ သူ လည်းနှုတ်ဆက်ပြောချင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်......
လောကကြီးထဲကနေ ရုတ်တရက်နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်ခွါသွားခဲ့တဲ့ သမီးလေး susan ..... သူ ချစ်ရ ခင်ရတဲ့ သူတွေအားလုံးအတွက် တမလွန်ဘ၀ကနေ သူ လည်းနှုတ်ဆက်ပြောချင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်...... Aung Thu 17 Aug 2015 · 4.6K views
Robots "Change the World"
ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲမယ့် စက်ရုပ် (၅)မျိုး #McE #Robotics #Mechatronics . ယခုခေတ်မှာ စက်ရုပ်တွေဟာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ နှစ်ရှည်လများ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ သုတေသနနဲ့ တိုးတက်မှုများအပြီးမှာတော့ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲလာစေမယ့် စက်ရုပ် (၅)မျိုးကို NASA Jet Propulsion သုတေသန မှ Chief Engineer Dr. Ashitey Trebi-Ollenu ကနေ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ . (၁) Robosimian - ခြေလက် (၄)ချောင်းရှိတဲ့ စက်ရုပ်ဖြစ်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးအပါအဝင် အလိုရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးချနိုင်တဲ့စက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) Ada - 3-D printing နည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ စက်ရုပ်လက်ဖြစ်ပြီး အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို 3D-Printing နဲ့ပဲပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ (၃) Phoenix - စွမ်းအင်သုံး ပြင်ပထောက်ကူစက်ရုပ်ဖြစ်ပြီး သာမန်အားနဲ့ မ လို့မရတဲ့အရာတွေကို ကူညီပေးသလို မသန်စွမ်းတွေအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုစေနိုင်တဲ့အတွက် လူသားနဲ့ စက်ရုပ်ပေါင်းစည်းခြင်းအတွက် ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ (၄) Pepper - ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့စက်ရုပ်တွေမှာ လစ်ဟာနေတဲ့ မျှဝေခံစားတတ်ခြင်းကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ Emotional Intelligence နည်းပညာသုံးစက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ (၅) Curiosity - 120 watts သာအသုံးပြုတဲ့ Mars ဂြိုလ်သုံးစက်ရုပ်ဖြစ်ပြီး ဒီနည်းပညာကို ကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဝေလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကို လျှပ်စစ်ပမာဏအနည်းငယ်သာအသုံးပြုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Credit - BBC World Service WYTU 19 Jun 2017 · 1.4K views
ချောငိးရိုတ် ကားသမားဇာတ်လမ်း အသစ်စက်စက်။
ချောငိးရိုတ် ကားသမားဇာတ်လမ်း အသစ်စက်စက်။ Ko Oo 16 Nov 2016 · 4.3K views
ခင်ရတဲ့ ကိုကြီးတစ်ယောက်ဆိုထားတာလေကို နားထောင်ကြည့်ပါအုံး အရမ်းရမ်းကောင်းတယ်
ခင်ရတဲ့ ကိုကြီးတစ်ယောက်ဆိုထားတာလေကို နားထောင်ကြည့်ပါအုံး အရမ်းရမ်းကောင်းတယ် Ko Lin3Dec 2017 · 25 views
မြန်မာ ချောင်းရိုတ် HD အသစ်လေးပါ😜😜😜😜
မြန်မာ ချောင်းရိုတ် HD အသစ်လေးပါ😜😜😜😜 အိုင်တီ ဇီုးလေး 16 Dec 2020 · 713 views
အောကားရှယ်မြန်မာဖင်လိုးကားများسیکس فلمအိန္ဒိယလိုးကားဂနျြပနျလိုကာုးမြန်​မာဇာတ်​ကားသစ်​များPorno vieo xxxလီုးကာုးမြန်မာအောကားရတနာမိုင်​သီချင်းများครอบครัวมัน พ่ะย่ะค่ะ potato star ตอนที่ 520 years old türkçe altyazılıအပြာကားသီးသန့်Www.drmamagyi.comဖင်လိုကားဖငျလိုကာမြန်မာချောင်ရိုက်လိုးကားသီးသန့်အောကားထိုင်းဒေါကျတာဗိုလျကလေး